Global Earth အများပိုင်ကုမ္ပဏီ အစုရှယ်ယာရှင်များကို ဇွန်လအတွင်း ဖိတ်ခေါ်မည် - Yangon Media Group
Global Earth အများပိုင်ကုမ္ပဏီ အစုရှယ်ယာရှင်များကို ဇွန်လအတွင်း ဖိတ်ခေါ်မည်
မြန်မာနိုင်ငံငါး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် ဦးဆောင်တည် ထောင်ထားသည့် Global Earth အများပိုင်ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာ ရှင်များကို ဇွန်လအတွင်း ဖိတ် ခေါ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။ Global Earth အများပိုင် ကုမ္ပဏီကို ငါးမွေးမြူရေးကဏ္ဍ၊ SMEs လုပ်ငန်းများတိုးတက်ဖွံ့ ဖြိုးစေရန်ရည်ရွယ်တည်ထောင် ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းကုမ္ပဏီအ နေဖြင့် ဦးစွာဧရာဝတီတိုင်းဒေသ ကြီး၊ ပန်းတနော်မြို့နယ်တွင် ငါး တန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို အ ကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာ တိုးနန္ဒာတင်က”နောက်လဇွန်လ ထဲမှာ ရှယ်ယာခေါ်ဖို့ကြိုတင်ပြင် ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ရှယ်ယာ တစ်စုမှာ သိန်းတစ်ထောင်ဆိုတဲ့ အခါကျ all inclusive ပြောတဲ့အ တွက်ကြောင့် အားလုံးကိုပါဝင်စေ ချင်တယ်။ သိန်းငါးဆယ်လောက်ပဲ တတ်နိုင်တဲ့သူတွေလည်း အ ယောက် ၂ဝဆိုရင်သိန်းတစ်ထောင် ဖြစ်မှာပဲ။ သိန်းတစ်ရာလောက် တတ်နိုင်တဲ့သူတွေဆိုရင် ဆယ် ယောက်ဆိုရင် သိန်းတစ်ထောင် ဖြစ်မယ်။ လူတိုင်းပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်အဲဒါကို SMEs ဖွဲ့ပေးမယ်။ SMEs အစု၁ဝဝဖွဲ့ပြီး စလုပ်ဖို့ဖြစ် တယ်။ သိန်း၁ဝဝနဲ့ SMEs အစု ၁ဝဝ ကို စလုပ်မယ်။ အဓိကဦးစား ပေးပေါ့။ SMEs မပြည့်တဲ့အခါမှာ အခြားရှယ်ယာရှင်တွေလည်း ပါ ဝင်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ်တတ်နိုင်သ လောက်ဖြစ်ဖြစ် ဝင်လို့ရတယ်။ အဓိက စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် လူတိုင်း အစုရှယ်ယာဝင်လို့ရအောင် လုပ်ထားတဲ့ ပြည်သူပိုင်ကုမ္ပဏီ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အကုန်လုံး ဝင်လို့ရတယ်”ဟု မေ၂၈ရက်က မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်၌ကျင်းပပြုလုပ်သည့် သားငါးကဏ္ဍဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များ ပုံမှန်တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြောသည်။
ယင်းကုမ္ပဏီတွင် အစုရှယ် ယာထည့်ဝင်သူများအတွက် တစ်နှစ်တစ်ခါ အမြတ် ၁၅ ရာခိုင် နှုန်းပေးနိုင်သည့် အခြေအနေ မျိုးနှင့် စတင်နိုင်အောင်ဆောင် ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ရှယ်ယာထည့်ဝင် သူများအနေဖြင့် ကုမ္ပဏီညွှန်ကြား ထားသည့်အတိုင်း သားဖောက် မှုစနစ်၊ အစာကျွေးနည်းစနစ်၊ ရေ စစ်ဆေးမှုများကို အနီးကပ်ပြသ လုပ်ဆောင်ပေးသွားမည့်အပြင် အစာ လိုအပ်ချက်များရှိပါကကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် နှစ်ရှည်ချေးငွေတို့ဖြင့် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Global Earth အများပိုင် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ငါးတန်မွေးမြူ ရေးလုပ်ငန်းအပြင် ငါးမွေးမြူရေး၊ အအေးခန်းလုပ်ငန်း၊ အိတ်ပို့စ်လုပ် ငန်းများကိုလည်း တွဲဖက်လုပ်ကိုင် မည်ဖြစ်ပြီး ငါးတန်မွေးမြူရေးမှ ရရှိလာသည့်ထွက်ကုန်များကို တရုတ်နှင့် အမေရိကန်ဈေးကွက် ထိုးဖောက်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဖမ်းဆီးရမိပြီး တရားရုံးမှ အမှုပြီးပြတ်သော ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက်များ လေလံတင်ရောင်းချ
လစဉ်ထောက်ပံ့ငွေ ကျပ် ၃ဝဝဝဝ ရရှိမည့် ချည်မျှင်နှင့် အထည်အလိပ် ကျွမ်းကျင်သူ သင်တန်းနှင့် လက်?
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် ခိုး၊ ဆိုး၊ လု၊ နှိုက်များ ကျဆင်းရေးအတွက် လင်းယုန်စီမံချက် မကွေြး?
ချီလီအတွက် ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့သော ဆန်းချက်ဇ်ကို နည်းပြရူဒါနှင့် ဗီဒဲလ် တို့ ချီးကျူး
ကဆုန် လပြည့်နေ့တွင် မန္တလေး နန်းမြို့ရိုး ကျုံးထောင့် လေးထောင့်၌ ပရိတ်တရားတော် ရွတ်ဖတ်ပူဇေ??
”အနုပညာလောကကို ကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲ ကြည့်တာကြောင့် တိုးတက်မှုတွေကိုပဲမြင်ပါတယ်” သရုပ်ဆောင် ပန်းဖြူ